Russia an'i Aleksey Savchenko | Famoronana an-tserasera
Rehefa malahelo ny lanezy isika amin'ity ririnina malefaka ity dia afaka foana isika manatona akaiky kokoa ny asa kanto an'ny mpanao hosodoko sasany. Iray izay mamindra ny haben'ny vanim-potoana maharitra an'i Russia amin'ny fotoana ary iainany amin'ny fomba mety indrindra amin'ny sary hosodoko Savchenko Aleksey.
Aleksey dia afaka nandalo ho an'ny iray amin'ireo mpanao hosodoko izay hampiseho ny asan'i Anton Chekhov, Mpanoratra tantara an-tsehatra Rosiana ary mpanoratra, tompon'ny tantara fohy ary anisany izy mpanoratra iray izay adika indrindra rehefa ao anatin'ny fiofanana ho mpilalao.
Aleksey dia mitondra antsika alohan'ireo fizahan-tany mora foana avelao ny sanganasan'ny mpanoratra tantara an-tsehatra Rosiana toy ny The Three Sisters na The Cherry Garden. Hoso-doko bebe kokoa ankehitriny fa tsy mamela an'io firenena io.
Miaraka amin'ny tsipika borosy marina sy mivaingana, Savchenko Aleksey dia mitondra antsika amin'ny famoronana izay mandalo bebe kokoa ny antsipiriany alohan'ny fikirakirana mazava. Io rivo-piainana manokana angoninay avy amin'ireo sary hosodoko nozaraina eto.
Tsy afaka mankany amin'ny media sosialy na pejy Facebook-nao izahay, irery ihany mitazona ny sary hosodoko sasany isika ary ny fikarohana Google hahitana ny ambiny amin'izy ireo, izay, raha ny fanazavana, misy vitsivitsy. Mpandoko hosodoko manokana izay manana tombana ho an'ny fizahan-tany sy seho an-tanindrazana izay mety tsy ho voamariky akory nefa asehony amin'ny fomba miafina.
Mpandoko sary miasa amin'ny menaka ary ao ny tarigetrany dia ny taratry ny mazava hafa noho izay hitantsika tato anatin'ny herinandro vitsivitsy Mofomamy Vicente Romero. Hoso-doko menaka sasantsasany izay nisamborana rivotra malemilemy sy fanjakana somary mpandala ny nentin-drazana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny tontolon'ny ririnina ao amin'ny Russia an'i Aleksey Savchenko